Shanta Marxaladood ee Kobaca Ganacsiga - NewGenApps - DeepTech, FinTech, Blockchain, Cloud, Mobile, Falanqaynta
Ku laabo blog
ganacsiga la -talinta
Shanta Marxaladood Ee Kobaca Ganacsiga
By Martida Post
Ma jirto hab buste lagu qeexo korriinka mid yar ganacsi: macneheedu ma korodhay dakhliga? Ama koraya kaaga macaamiisha? Jawaabtu si kastaba ha ahaatee, muujinta koritaanka ugu yaraan meelaha qaar ayaa fure u ah caafimaadkaaga ganacsi wuxuuna wanaajiyaa fursadaha guusha mustaqbalka. Si kastaba ha ahaatee, waa muhiim in a ganacsi fahma marxalada ay ku sugan tahay si uu ugu wargaliyo istiraatijiyad korniinku u socdo si sax ah.
Sidaa darteed, iyada oo aan wax kale oo dheeraad ah, halkan waxaa ah shanta marxaladood ee yaryar ganacsi koritaanka. Shirkad kastaa waxay maraysaa marxaladahan mar haddii ay ku noolaan karto suuqa muddo ku filan. Marxaladda in aad ganacsi waa at qeexi doono qaar ka mid ah kuwa ugu waaweyn caqabadaha in aad wajihi doonto oo ku tusi doonto tillaabooyinka aad u baahan tahay inaad qaaddo si aad shirkaddaada u gaadhsiiso heerka xiga. Sidoo kale waa muhiim inaad tixgeliso booskaaga suuqa iyo nooca ganacsi model aad isticmaalayso si aad u fahanto meesha aad ku jirto safarkaaga korriinka.
Marxaladani waa halka a ganacsi wuxuu bilaabmaa marka milkiilayaashu bilaabaan fikradda alaabtooda ama adeegyadooda oo ay isku dayaan inay ka dhistaan ​​suuqyadooda suuqa. Waxaa jiri doona shaqaale marka laga reebo aasaasayaasha iyo daneeyayaasha muhiimka ah, oo waxaa jiri doona wax yar in la waayo ganacsi dhismayaal ku yaal meel. Caqabadaha Marxaladdan waxaa ka mid noqon doona:
Helitaanka baahi suuqa ka jirta oo badeecadaha ama adeegyadu ay dabooli karaan
Dejinta tirakoobka alaabta ama adeegyadu waxay soo jiidan doontaa
Go'aaminta faa'iidada ganacsi model wax soo saarka iyo gaarsiinta ku filan
Ka shaqaynta socodka lacagta caddaanka ah iyo maalgelinta si aad u hesho ganacsi dhulka ka baxsan
Ku dhawaad ​​shan meelood meel ganacsiyada oo dhan ku guuldareysto sanadka ugu horeeya, halka tiradaasi kor u kacday 50% muddo shan sano ah. Tani waxay inta badan hoos ugu dhacdaa bixinta fikradda liidata ee aan ku guulaysan in ay suuq u hesho lafteeda. Marxaladdan, caqabada ugu muhiimsan waa in la ogaado haddii ay ganacsi fikraddu waa faa'iido ku filan si ay u sii noolaato muddo dheer oo ku filan si ay u daboosho bilawga bilawga iyo kharashka hawlgalka.
Inta badan ganacsiyada gaara marxalada labaad waxay wali ku shaqayn doonaan miisaan yar oo jilicsan ganacsi model. Si kastaba ha ahaatee, waa inay koraan saldhigga macaamiisha oo si togan uga jawaabaya wax-soo-saarkooda iyo bixinta dakhli ku filan si ay u daboolaan kharashaadka hawlgalka. Xuddunta caqabadaha Marxaladdan waxaa ka mid noqon doona:
Soo saarista dakhli ku filan oo lagu daboolo kharashaadka hawlgalka mustaqbalka la filayo
Ilaalinta dhaqaale ahaan waara ganacsi model
Ugu dambeyntii ka soo saarida faa'iido saafi ah ganacsi
Ganacsiyada waxaa laga yaabaa inay ku fashilmaan marxaladan sababtoo ah ma awoodaan inay daboosho kharashaadkooda shaqo sababtoo ah waxtar la'aan ama kharash badan ganacsi model. Sidaa darteed, diiradda ugu weyn waa in ay ahaato horumarinta xasillooni ku filan si loo bilaabo hubinta faa'iidada.
In kasta oo ganacsiyo badani ay isku arkaan in ay ku sii qulqulayaan marxaladda badbaadada sannado badan, shirkadaha maareeyo inay soo saaraan faa'iido muddo dheer ah ka dibna waxay la kulmaan su'aasha ah waxa lagu sameeyo dakhliga saafiga ah ee dheeraadka ah ganacsi ayaa kasbanaysa. Inta badan ganacsi Milkiilayaasha iyo daneeyayaasha, su'aashu waxay leedahay laba natiijo: ama waxay faa'iido u soo saaraan dakhli gaar ah ama waxay go'aansadaan inay dib u maalgeliyaan ganacsi isku day lagu dhalinayo koritaan dheeraad ah. Ugu weyn caqabadaha Marxaladda guushu waxay noqon kartaa:
Qaadashada ganacsi nidaamyada si loo hubiyo faa'iido joogto ah
Shaqaalaysiinta kooxda saxda ah si ay u fuliyaan ganacsi moodel sax ah
Sida loo isticmaalo faa'iidada saafiga ah si loo kobciyo ganacsi dheeraad ah
Meheradaha ku fashilma heerkan ayaa caadiyan ku guul daraystay inay hal-abuuraan badeecadahooda ama adeegyadooda si ay uga sii jiraan suuqa ama aanay u helin faa’iido. ganacsi model, oo markaa dib ugu noqo marxaladda badbaadada. Meheradaha aan xiisaynaynin korriin dheeri ah waxay u baahan yihiin inay diiradda saaraan waaritaanka. Si kastaba ha ahaatee, waa in a ganacsi Hamiga aad u leedahay balaadhinta dheeraadka ah, waxa loo baahan yahay in diiradda la saaro sidii loo heli lahaa shaqaale cusub iyo raasamaal ku filan si loo suurtogeliyo balaadhinta iyada oo faa'iidada laga helayo.
Meheradaha u soo gudba marxaladda kacitaanka waxay bilaabaan inay la kulmaan kobaca degdega ah ee baahida alaabadooda ama adeegyadooda, sidaa darteed si guul leh uga gorgortanka koritaankan faa'iidada ugu badan waxay noqotaa caqabada ugu weyn. Marxaladdan, ganacsiyadu waxay u janjeeraan inay qaataan qaab baahsan oo baahsan sida aasaasayaasha iyo maamulayaasha ay u wakiishaan maalinba-maalin ganacsi hawlgallada lagu gorgortamayo caqabadaha koritaanka cusub ee la helay. Qaar ka mid ah tixgelinnada ugu muhiimsan waxaa ka mid ah:
Shaqaalaysiinta dadka saxda ah si loo xaqiijiyo ballaarinta waxtarka leh
Gudaha maaraynta saamaynta koritaanka degdega ah
Samaynta dhuumaha dakhliga si loo caawiyo maaliyadda koritaan dheeraad ah
Joogtaynta a ganacsi model ah oo aan ka badbadin gaadhista shirkadda
Muddadan koritaanka firfircooni waxay bixisaa fursado kobaca faa'iido darrada ah, laakiin sidoo kale waxay heli kartaa ganacsiyada ay ka adkaadeen kobaca dhaqdhaqaaqa iyada oo aan la helin xeelado maamul oo habboon. Maadaama mulkiilayaasha ganacsigu ay tahay inay u jeediyaan dareenkooda qorsheynta muddada dheer, waa lagama maarmaan in shirkadu awooddo shaqaaleysii dadka saxda ah in lagu aamino socodsiinta ganacsiga, iyo cidda keeni karta karti qiimo leh si ay uga caawiso la kulanka cusub caqabadaha marka ay soo baxaan. Shirkaduhu waxay kaloo maxkamadayn karaan maalgashadayaasha iyo raasamaal diineed si ay gacan uga geysato hoos u dhigida ballaarinta mustaqbalka iyadoo sidoo kale lagu bixinayo wax badan oo ku saabsan summeynta iyo suuq-geynta si ay uga caawiso in ay xoojiyaan booskooda suuqa.
5. Qaangaadhnimada Khayraadka
Ka dib marxaladda qaadista rollercoaster, ganacsigu waxay u badan tahay inuu ogaado in heerka kobaciisa uu ugu dambeyntii istaago. Ka dib markii ay heleen jago adag oo suuqa ah, milkiilayaasha iyo maamulayaasha waa inay hadda diiradda saaraan ilaalinta booskan. Caqabadaha Marxaladdan waxaa ka mid ah:
Ka dhigista qaabka ganacsi ee si buuxda u bislaaday mid kharash-ku-ool ah oo waara intii suurtogal ah
Ka ilaalinta shaqaalaha sida dabada korniinku u maqan tahay
Cusboonaysiinta badeecadaha iyo adeegyada si loo hubiyo in wax-soo-saarka shirkadu uu weli khuseeyo suuqa
Raadinta suuqyo cusub si kor loogu qaado dakhliga
Meheradaha ku guul darraystay heerkan oo kale ayaa inta badan sabab u ah niyad-jabka ka dhashay heerka ay hadda gaarayaan ee guusha, maadaama gaajada ka jirta maalmaha ganacsigu ay joogsato hal-abuurnimada. Si kastaba ha ahaatee, shirkadaha heerkan ku soo caan baxay ayaa qaab ganacsigoodii ka dhigay mid aan biyo lahayn iyagoo ka feejigan isbadelka suuqa iyo fursadaha soo baxaya. Ganacsiyadani waxa kale oo laga yaabaa inay eegaan helitaanka tartamayaasha ama kuwa rajo leh GOORMUU si ay gacan uga geystaan ​​ballaarinta saamigooda suuqa.
Kobcinta ganacsi yar waa arin lagu ogaanayo heerka ay shirkadu ku sugan tahay ka dibna la qaado tillaabooyinka ku haboon ee lagu hagi karo marxaladda xigta. Kobacdu sidoo kale waxay u baahan tahay wacyigelin degdeg ah oo ku saabsan isbeddelada suuqa iyo qaabka ganacsiga waxaad u baahan doontaa inaad sare u qaaddo soo celinta iyadoo ku xiran heerka aad ganacsigu ku sugan yahay: waxa shaqeeyay inta lagu jiro jiritaanka waxaa laga yaabaa inaysan waxba ka soo bixin marxaladda badbaadada, iyo aqoonsiga waqtiga saxda ah ee aad u boodboodi karto ballaarinta waxay la macno tahay farqiga u dhexeeya guuldarada iyo guusha.
Ku qor wargeyska
Kusoo qor Wargeyskeena Wixii Cusbooneysiin ah ee ugu dambeeyay, Qiime dhimis gaar ah, iyo waxyaabo kaloo badan.
Maxay Suuqgeynta Warbaahinta Bulshadu muhiim ugu tahay Ganacsigaaga?
Jul 22 | ganacsiga la -talinta, Media Social Suuq
Adeegsiga Teknoolojiyada si aad u Kobciso Ganacsigaaga La-talinta
Sep 25 | ganacsiga la -talinta, La talinta bilowga, La-talinta Teknolojiyada
Ku soo Dhawo Wargeyskayaga
Ku soo biir liistadayada boostada si aad uga hesho wararkii ugu dambeeyay iyo cusbooneysiinta kooxdeena.
codsiyada curinta cusub